Umatilasi Oyedwa Wentwasahlobo Ngamanani Amanani Aphelele | Rayson
Setha eminyakeni edlule, iRayyson ingumenzi ochwepheshe futhi futhi umphakeli onamakhono aqinile ekukhiqizeni, ekwakheni, kanye ne-R & D. Umatilasi oyedwa wasentwasahlobo unikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokuthuthukiswa kwekhwalithi yesevisi, sisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomatilasi wethu omusha we-Story Spring noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi. Isilinganiso sendwangu ngeke sishintshe kalula ngemuva kokugeza noma okunye ukucubungula owomile / emanzi.